The Sony Xperia Z3 na ọtụtụ ndị ọzọ smartphones ga-ekpe na-enweghị gam akporo 7.0 Nougat | Akụkọ akụrụngwa
Sony Xperia Z3 na ọtụtụ ndị ọzọ smartphones ga-ahapụ na-enweghị gam akporo 7.0 Nougat
Villamandos | | android, Mobiles, Noticias
Google amalitelarị usoro ọhụụ nke sistemụ arụmọrụ gam akporo, nke a maara dị ka Nougat, nke bụ nke asaa n'ime ọnụọgụ ole anyị hụworo kemgbe emepụtara ngwanrọ a maka oge mbụ. N'ime oge ikpeazu anyị na-amụ banyere atụmatụ nwelite nke ụfọdụ ndị nrụpụta, nke oge niile ga-adị nwayọ nwayọ, anyị amalitela ịma na Mobile ngwaọrụ ma ọ bụ mbadamba agaghị enweta ha gam akporo 7.0 Nougat nri mgbe ọ bụla.
Ndepụta nke ngwaọrụ ndị a na-agaghị enwe ike imelite na ụdị ọhụrụ nke gam akporo dị ogologo, mana n'agbanyeghị ndepụta ahụ niile, otu ọnụ na-adọrọ uche dị elu karịa ndị ọzọ na nke ahụ ga-enyere anyị aka ịkọwa ọtụtụ ihe. Anyị na-ekwu maka ya Sony Xperia Z3, nke natara ihe nlere nke anọ mbụ, ma ga-ahapụ ya n’enwetaghị ụdị ikpeazụ nke gam akporo Nougat. A ga-amata ihe ndị a n'isiokwu a, nke ga-ekpughe ma mee ka anyị mata ọtụtụ ọdụ ndị ọzọ ga-enwe ike imelite na sistemụ arụmọrụ Google kachasị ọhụrụ.
1 Kedu ihe kpatara Sony Xperia Z3 agaghị enweta gam akporo Nougat?
2 Mmalite nke nsogbu ahụ
3 Oge (oji) nke gam akporo 7.0 Nougat
Kedu ihe kpatara Sony Xperia Z3 agaghị enweta gam akporo Nougat?
Maka oge ahụ Ọ dịghị ihe kpatara ya mara maka mmelite nke Sony Xperioa Z3 na Android 7.0 Nougat, nke Sony nyere., ma ihe anyị maara bụ ihe kpatara Ola Olsson na Zingo Andersen, ndị na-ahụ maka ihe atụ nke Sony's Android project Initiative nke na-eje ozi iji meziwanye Sony Xperia Z3 na Xperia Z3 Compact dabere na echiche ndị ọrụ.
Ihe ndị a ga - eme ọkachasị na ngalaba ọrụ aka ya na ngalaba iwu. Ọ bụ na Sony Xperia Z3 na Sony Xperia Z3 Compact na-agbatị ihe nhazi n'ime Qualcomm Snapdragon 801, nke Android AOSP anaghị akwado, ya mere, ọ naghị ezute akụkụ dị mkpa nke ihe ndị a chọrọ iji nwee ike ịkwalite ọkwa ọhụrụ nke gam akporo.
Ọ bụrụ na anyị eleba anya na ọdụ ndị ọzọ na ahịa, anyị ga-ahụ na ọtụtụ ọnụọgụ ngwaọrụ na-arịgo Qualcomm Snapdragon 801 na processor 800 ahụ, emetụta ya. N'ime ndepụta a nke smartphones anyị hụrụ ihe ndị a; Lenovo ZUK Z1, OnePlus X, Xiaomi Mi Note, ZTE Axon na ZTE Grand S3.
Mmalite nke nsogbu ahụ
Dị ka ị gụrụ, ngwaọrụ ọ bụla nwere Qualcomm Snapdragon 801 ma ọ bụ Qualcomm Snapdragon 800 processor agaghị enwe ike ịnata gam akporo 7.0 Nougat na ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa maka ndị nhazi abụọ a iji rụọ ọrụ na ụdị ọhụrụ nke gam akporo ewepụla na koodu nke sistemụ. Nke a apụtaghị na ịnweghị ike ịnweta ngwanrọ ọhụrụ ahụ n'ụzọ ọrụ gọọmentị ọzọ, ebe ọ bụ na onye ọrụ ọ bụla nwere ike itinye ndị ọkwọ ụgbọala ahụ n'ụzọ dị mfe ma ọ bụ obere, mana ọ na-ahapụ gị n'enweghị ohere ịnweta gam akporo 7.0.
Nsogbu bụ na ọ bụghị ihe niile dị mfe dịka o yiri, ma ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa karịa itinye ndị ọkwọ ụgbọala ole na ole, onye ọ bụla na-emepụta ihe nwere ike itinye ha, na-eme mgbanwe dịka ndị ha na-eme na ROM. Agbanyeghị, a ga-enwerịrị ọnụọgụ ọnọdụ iji nwee ike iweta gam akporo 7.0 na ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ mbadamba.
Ihe ọ bụla emepụtara nke nwere ike ịnweta Google Aps, otu n'ime atụmatụ dị ukwuu nke gam akporo, bụ na ọ ga-agbaso usoro nke Google CTS. Ihe ndị a bụ ihe achọrọ, ụfọdụ n'ime ha bụ teknụzụ, na ngwaọrụ ọ bụla ga-ezute iji nweta Google Aps.
Na mgbakwunye, Google chọkwara ka ngwaọrụ bụrụ dakọtara na OpenGL ES 3.1 ma ọ bụ Vulkan graphics APIs. Ijikọ ntụpọ anyị ga-enweta na GPU ndị na-ekwekọghị na ndị eserese API na n'etiti nke anyị na-ahụ na Adreno 300, Mali-400 ma ọ bụ Mediatek ezinụlọ, nke na-ahapụ anyị ogologo ndepụta nke njedebe nke taa ga-enweta mmelite ahụ gam akporo. 7.0 Nougat.
Ọzọkwa, ezinụlọ Adreno 300 anaghị akwado OpenGL 3.1 n'ihi enweghị ike teknụzụ, ebe ezinụlọ Mali-400 nwere naanị ndakọrịta ruo OpenGL 2.0.
N'ebe a, anyị na-egosi gị elongated ndepụta nke ngwaọrụ mkpanaaka taa anaghị enweta ihe ndị Google chọrọ rịọrọ ya mere enweghị ike imelite ya na gam akporo ọhụrụ 7.0 Nougat;
Ajụjụ: Aquaris X5, Aquaris E5s
Asus: Zenfone Max, Zenfone 2 Laser, Zenfone Go, Ndụ
Motorola: Moto G (3rd Gen), Moto E (2nd Gen), Moto G4 Play, Moto G (nke abụọ Gen, 2G)
Xiaomi: Redmi 2, Redmi 2 Prime, Redmi 2 Pro, Redmi Rịba ama Prime, Mi Mara
Lenovo: ZUK Z1, A6000, A6000 gbakwunyere, A6010, A6010 gbakwunyere, Phab, A1000, A5000, Vibe A, A1900
LG: K10, G4 Stylus, Stylus 2, X Screen, X Style, K7, K4, Leon, G Stylo, Stylo 2, Mmụọ, G4c, Zero, K3, AKA, Tribute 2, Joy, K7, Magna, K5, Ray
Huawei: Y6, Y625. Y635, SnapTo, P8 Lite, Y5II, Y3II, Sọpụrụ 4C, Sọpụrụ 5A, Y360, Honor Bee, ọdọk Y540
Alcatel: Pixi 4 (6) Pixi 4 (4), Pixi 3 (5.5), Pixi 3 (4.5), Pixi 3 (3.5), Pixi 3 (4), Pop 4, Pop Star, arụsị 3 (4.7), Fierce XL, Gaa kpọọ
Sony: Xperia E4, Xperia Z3, Xperia Z3 kọmpat
Oge (oji) nke gam akporo 7.0 Nougat
Obi abụọ adịghị ya na ọdịnihu dị oke oji maka gam akporo 7.0 Nougat, mgbe ihe siri ike Google chọrọ n'aka ndị nrụpụta na ngwaọrụ ha. Ọ bụrụ na nnukwu ọchụchọ ahụ achọghị ihe ngwọta maka nsogbu ndị a anyị tụlere na ngụkọta, ngụkọta nke 432 dị iche iche ọnụ agaghị enweta gam akporo Nougat, nke e gosipụtara n'oge 2015 na 2016.
Anyị na-ekwu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% nke smartphones ndị e gosipụtara n'oge ndị a agaghị enweta ụdị ọhụrụ nke gam akporo, ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ngwaọrụ ndị a dị n'etiti ma ọ bụ njedebe dị ala.
Ngwaọrụ mkpanaka gị na ndepụta nke njedebe gam akporo nke na-agaghị enweta ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ nke Google mepụtara?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Sony Xperia Z3 na ọtụtụ ndị ọzọ smartphones ga-ahapụ na-enweghị gam akporo 7.0 Nougat
Ọzọkwa HTC One M8 ga-anọ ma ọ bụrụ Nougat: '(
Zaghachi ka brian
MIT achọpụta otu esi amụba site na 10 ọsọ nke WiFi
Samsung nwere ike inwe nsogbu na ngwaahịa nke Samsung Galaxy Note 7